Cameron oo amaanay Duqa magaalada London - iftineducation.com
iftineducation.com – Rai’sal wasaaraha Britain, David Cameron ayaa duqa magaalada London, Sadiq Khan ku amaaanay in uu yahay nin ay aad ula wayn yihiin Muslim nimadiisa iyo Biritish nimadiisa.
Waxay si wada jir ah u ambaqaadayaan in Britain ay noqoto mid xoog ku leh dalalka Yurub dhexdooda marka laga gudbo in hogaamiyaha Labour-ka Jeremy Corbyn uu diiday in uu u ol’oleeyo Cameron.
Tani waxay imanaysaa iyada oo Cameron uu horay u dhaliilay Khan intii ay socotay doorashadii duqa magaalada London.
Khan ayaase difaacay in uu si cad ugu ol’oleeyo Rai’sal wasaaraha ka tirsan xisbiga Tory.
Wuxuu sheegay in isaga iyo Rai’sal wasaaruhu ay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan, balse arrinta muhiimka ah ay tahay in uu Rai’sal wasaaraha si dhaw ula shaqeeyo marka ay timaado arrin dan u ah reer London.
Wuxuu intaas ku daray in nus milyan shaqo ah oo London taala ay ku xirantahay ka sii mid ahaanshaha Midawga Yurub, sidaas daraadeedna codka aan ka sii mid ahaanno uu la mid yahay shaqooyin iyo fursado.
Cameron ayaase hadda Khan ku amaanay guushii uu ka gaaray doorashadii duqa magaalada London.